Noraràn’i Bahrain ny vondrona chat amin’ny BlackBerry · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Avrily 2019 3:43 GMT
Tsy ela akory izay i Bahrain no nandràra ny fampiasana ny vondrona karajia BlackBerry noho ny ahiahy mikasika ny “korontana sy fisavoritahan-tsaina” izay mety ho vokatry ny fizarana sy ny fanaparitahana vaovao ao an-toerana amin'ny alalan'ireo vondrona ireo, araka ny filazan'i Abdullah Yateem, sekretera lefitra ao amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao tamin'ny mpanao gazety. Noho ity fanapahan-kevitra ity, dia nametraka ohatra amin'ny fandraisana fepetra ara-pitsarana hamelezana ireo mpiseran'ny vondrona kiarajia (chat) BlackBerry i Bahrain.
Nitatitra ny vokatry ny lalàna tao amin'ny “Breaking News,” iray amin'ireo vondrona chat lehibe indrinda ny Gulf News:
Ny vokatra mivantana avy amin'ny fanapahan-kevitry ny minisitera dia ny fampiatoana ny vaovao isan'andro omen'ny “Breaking News”, natombok'i Muhannad Sulaiman, mpanao gazety Bahrainita ho an'ireo mpisoratra anarana ao amin'ny BlackBerry maherin'ny 13.000 .
Ny tatitra isan'andro omen'ny Breaking News maimaim-poana dia famintinana amin'ny 6 maraina ny pejy voalohany ao amin'ireo gazety enina mpivoaka isan'andro.
“Miala tsiny amin'ny fanelingelenana aho, saingy araka ny fantatrao, tsy hitako intsony izay atao,” Muhannad, nanoratra hafatra ho an'ny mpanjifany.
Ny vondrona karajia dia tena ampiasaina be ao Bahrain mba hanomezana vaovao farany isan-karazany manomboka amin'ny lohatenim-baovao hatramin'ny fanambarana ara-politika. An'arivony ireo mpanjifa ao amin'ireo vondrona ireo izay voakasiky ny fandraràna.
Mpikatroka Bahrainita, Said Yousif naneho hevitra momba ny lalàna farany, manasongadina ny zava-bitan'i Bahrain amin'ny fanivanana ny aterineto:
Manimba ny fahalalaham-pitenenana ao Bahrain ity fanapahan-kevitra tsy am-piheverena ity, na dia tsy fepetra tokana avy amin'ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao amin'ny fikasana hametra ny fahalalahana miditra maimaim-poana sy ny fanaparitahana vaovao aza. Nanomboka hetsika manohitra ireo tranonkalan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona; ny bilaogera; ny fiarahamonina ara-pivavahana, ara-politika, sy ny ara-kolontsaina ity minisitera ity ary niasa amin'ny famerana ny fidirana amin'ireo tranonkala avy ao Bahrain. […] Noho izany hetsika izany, an-jatony ireo tranonkala nosakanana, anisan'izany ireo sehatra malaza, satria manome sehatra hitsikerana ny fandaharan'asan'ny manampahefana izy ireo.